Associate (Investment and Corporate) | Facilitation Limited ﻿
12.5.2021, Full time , Consulting / Professional Services
•	မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ တို့အရ လည်းကောင်း၊ အခြားဥပဒေများအရ လည်းကောင်း ရင်းနှီးမြှုပ် နှံသူများအား ၀န်ဆောင်မှုပေးရ သည့် Investment Proposal နှင့် Corporate Secretarial စာရွက်စာတမ်းများ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လိုအပ်ချက်တို. နှင့် အညီ တိကျ သပ်ရပ်စွာ တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
•	လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လိုအပ်သည့် ဥပဒေ၊ ဘာသာစကား၊ တင်ပြပုံ အရည်အသွေး နှင့် သတ်မှတ် ချိန် အတွင်း ရရှိအောင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
•	လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် သုသေသနဆောင်ရွက် ၍ အစီရင်ခံစာများ ရေးသားနိုင်ခြင်း။
•	ဘာသာပြန် လုပ်ငန်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
•	အလုပ် အပ်နှံသူများ၏ Investment နှင့် Corporate စာရွက်စာတမ်းများ Soft/ hard ဖိုင်များ ဖြင့် တိကျ၊ သပ်ရပ်၊ ပြည့်စုံ မှန်ကန်အောင် ထိမ်း သိမ်းခြင်း၊ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကိစ္စတစ်ခုချင်း အလိုက် Job Code များတွင် Soft/ hard file များတွင် မှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
•	ပင်မလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်းများကို ညွန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း။
•	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အရ ခရီးသွားလာခြင်း
		ဥပဒေဘွဲ့ နှင့်စီးပွါးရေးပညာ ဒီပလိုမာ (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးဘွဲ. နှင့် ဥပဒေ ပညာ ဒီပလိုမာ (သို့မဟုတ်)
	မြန်မာဘာသာကို ရုံးသုံးစာ အရေးအသား အဆင့်အထိ ရေးသား နိုင်ရမည်။
	အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား ကို စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Email, စာတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
	Microsoft word နှင့် excel ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူ (ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှု အထူးလိုအပ်ပါသည်။)
Legal & Compliance jobs Legal & Compliance jobs Consulting Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Admin cum Accountant(Yangon) (Code-39580 )
Mandalay Region 52 Days
Mandalay Region 96 Days
Mandalay Region 128 Days
Mandalay City 180 Days
Mandalay City 184 Days
Mandalay City 250 Days